Ady amin’ny Covid-19: malaky hivoahana amin’ny krizy ny fanatontoloana | NewsMada
Ady amin’ny Covid-19: malaky hivoahana amin’ny krizy ny fanatontoloana
« Misy mihevitra fa antony iray nampihanaka ny Coronavirus ny fanatontoloana. Io fanatontolona io anefa izao no lalana malaky hivoahana amin’ny krizy ara-toekarena”, hoy i Laurence Daziano, mpahay toekarena mpikambana ao amin’ny Filankevitra siantifika ho an’ny fanavaozana ny politika. “Ho an’ny sasany, ny Covid-19 no mpiara-miombona antoka voalohany hanoherana ny fanatontoloana”, hoy izy.
“Sarotra anefa ny hialana amin’ny fanatontoloana raha hiady amin’ny Covid-19. Eo amin’ny lafiny fahasalamana, mifampiankina ny ataon’ny firenena tsirairay hisorohana ny fitrangany vaovao. Haingana ny hahitana ny vaksiny raha mahay mifanampy ireo orinasa lehibe eran-tany mpanao fanafody. Eo amin’ny lafiny toekarena, hahomby ny fanarenana raha miara-miasa ny firenena tsy an-kanavaka”, hoy ihany i Laurence Daziano.
Maneran-tany ankehitriny ny Covid-19, raha niainga tany Sina ny faran’ny taona 2019. Ankoatra ny fahasalamam-bahoaka simba, mikatso ny toekarena. Any Etazonia, tao anatin’ny roa volana monja, misy 33 tapitrisa ny tsy anasa. Voadona mafy indrindra, ohatra, ny fitaterana ana habakabaka, ny fizahantany, ireo indostria mpanamboatra fiara. Misavovona tampoka ny trosam-panjakana. Iaraha-mahalala ny fitotongan’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Mitaky fanavaozana ny fiaraha-miasa eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena izany rehetra izany.